Chii chinoita kuti coccyx itambudzike panguva yekuzvitakura?
Mubvunzo wekuti nei tailbone inowanzokuvadza panguva yepamuviri inowanzofarira vakadzi vazhinji vari kutarisira mwana kuuya panyika. Sezvo mutemo, pane zvikonzero zvakawanda zvekuvandudzirwa kwechiratidzo ichocho. Funga kazhinji kacho uye edza kuongorora chinokonzera kurwadziwa mu sacrum uye coccyx.
Nemhaka yei, chaizvoizvo, inogona kuva nekurwadziwa mu sacrum here?
Zvinorwadza zvinorwadza, zvinowanikwa munzvimbo yechiuno, coccyx uye sacrum mumishonga yainzi "ankopchikovy pain syndrome." Nekuputsa uku, kurwadziwa kunonzwika munzvimbo yepineineum yose uye kunogona kupiwa ku coccyx kana anus.
Kana tikataura zvakananga pamusoro pekuti nei coccyx inorwadza panguva yehupamuviri, saka pakati pezvikonzero zvekutanga zvakakosha kusimbisa kushungurudzwa kweiyo nzvimbo munguva yakapfuura.
Zvisinei, kana zvisati zvamboitika kune mukadzi, zvino, zvichida, manzwiro anorwadza anokonzerwa nekuwedzera kwemapfupa emakumbo. Sezvo mutemo, zvakafanana zvinowanikwa kare kumagumo ezwi rekuita gumbo - mugore rechitatu. Nekushanduka kwakadaro, tailbone inokanganiswa zvishoma, zvichibva pamigumo yemunhu mumwe nemitsipa iyo nzvimbo yacho yakawanda inogona kuvharirwa.
Izvi zvakakoshawo kuziva kuti tsanangudzo yekuti nei mukadzi ane pamuviri ane checcyx, inogona kuva kusagadzikana kwemigumisiro yemashonga epfungwa. Izvi zvinonyanya kubhadharwa nekuwedzera kwekumanikidzwa kubva kumubereki wakakura mumakamuri ekushandisa.
Ndezvipi zvimwe zvingava tsanangudzo yekuti nei mukadzi ane pamuviri ane checcyx?
Kutaura zvazviri, zvikonzero zvinogona kukonzera marwadzo munharaunda ino zvakawanda zvokuti hazvisi nguva dzose kugona kutsanangura chaiyo zvakakonzera kurwadziwa mune imwe nyaya.
Saka, kazhinji kunzwisa kurwadza, kusanganisira munzvimbo ye coccyx, kunogona kukonzerwa nekushayikwa mumuviri weiyo amai vamangwana vanoona zvinhu zvakadai sa calcium uye magnesium.
Apo pachitaura kune chiremba panyaya iyi, vanachiremba vanoedza kutanga kuti vasabvise kukanganisa kwakadaro sekutyisidzira kwekukanganisa pamuviri . Njodzi mumamiriro ezvinhu akadaro, anowanikwa munzvimbo yakakona, anowanzopa mu sacrum uye coccyx.
Kushandisa ultrasound muhutano hwepakutanga, kuitira kuti uwane kuti nei chikafu chinoshungurudza, kazhinji chinopupurira kuvapo kwezvirwere zvinopinza mumitumbi yekubereka (adnexitis, oophoritis).
Nokudaro, inofanira kurehwa kuti, nekuda kwezvikonzero zvakawanda, vasati vabata chirwere ichi, vanachiremba vanofanira kuziva kuti nei chikwata chinoshungurudza panguva yepamuviri munyaya iyi, uye bedzi zvinoenderera kuchipatara.
Zviratidzo zvekuvhiringidzika kwakanyanya
Pinosol panguva yekuzvitakura
Chii chinonzi Actovegin chakashandiswa pakuzvitakura?
13 mavhiki ekudzivirira - fetal size
Kuongorora kwevhiki gumi nemaviri sei?
Kubata uye basa
Kusuruvara kwakanyanya panguva yekuzvitakura - chii chaunofanira kuita?
Hemorrhoids panguva yekuzvitakura
Fetal Egg Implantation - Zviratidzo
Kuongorora kwe toxoplasmosis pakuzvitakura
Kusvikira kumwedzi upi wepamuviri unogona kuita zvepabonde?
Itching panguva yekuzvitakura
Nzira yekushandisa snapshot - mitemo yekutanga yekuisa nekushandisa
Nzira yekutengesa kuberekwa
Kugadzirisa kwaPamela Anderson kana sekuvhiyiwa kwepurasitiki kunosangana nekunaka kwepanyama
Gungwa-buckthorn mafuta mumhino
Qigong nekurema kurasikirwa
Nekupi kupfeka shangu-palazzo?
Trimester of pregnancy - mazwi
Kugadzirwa kwekamuri kumusikana
Ryan Gosling naRachel McAdams
Young garlic - yakanaka uye yakaipa
Chloe Kardashian aiva nekenza yemuviri
Biorevitalization ne hyaluronic acid
Mwana mucheche wevasikana mutsime
Knitted warm skirts
Lily-Rose Depp akava nyenyedzi yeTanel show
Ndeapi manzwiro anoita munhu?
Curcuma nokuda kwekureruka - sei kutora?
Zvipfeko zveVaRoma vekare